सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच बिहीबार भएको सहमतिले राजधानीबाहिर स्वास्थ्य शिक्षाको पहुँचलाई निश्चित गरेको छ । सहमतिपत्रको पहिलो बुँदाको २२ औं नम्बरमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा सरकारले यो ऐन प्रारम्भ भएको ५ वर्षभित्र कम्तीमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।’
संसद्‍का सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले संसद्‌मा विरोध गरेको छ । डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षा र अध्यादेशअनुसारै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउनुपर्ने भन्दै कांग्रेसले तीन सातादेखि संसद् अवरोध गरेको थियो । कांग्रेसको अवरोधले एक साता संसद् बैठक चलेन ।
दुई महिनायता मलेसियाबाट नेपाल आउने हिमालयन र नेपाल एयरलाइन्सका जहाज यात्रुले भरिभराउ छन् । नेपालबाट मलेसिया उडदा भने अधिकांश सिट खाली हुन्छन् । यतिखेर यी एयरलाइन्सको व्यापार बिदामा आएका कामदारले मात्रै धानिदिएका छन् ।
बोलपत्रबिनै प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम उत्पादन जिम्मा निजी कम्पनीलाई
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रमको उत्पादन र सञ्चालन जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिएको छ । कार्यालयले सरकारी खर्चमा कार्यक्रम उत्पादनको जिम्मा बोलपत्र आह्वानबिनै कथा नेपाललाई दिएको हो ।
सरकार र डा केसीबीचको सहमति स्वागतयोग्य : कांग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकार र डा गोविन्द केसीबीच बिहीबार राति भएको सहमतिको स्वागत गरेको छ ।
राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को वार्षिक प्रतिवेदन शुक्रबार प्रस्तुत गरेका छन् ।
कार त्रिशूली नदीमा खस्यो, एक जनाको मृत्यु
त्रिशूली नदीमा कार खस्दा एक जनाको मृत्यु भएको छ । पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने धादिङ गजुरी गाउँपालिका–६, जहरेखेतमा शुक्रबार अपराह्न सडकबाट कार त्रिशूली नदीमा खसेको हो ।
पृथ्वीराजमार्गको ईच्छाकमना गाउँपालिका–३, कुरिनटार नजिक चुम्लिङटारमा शुक्रबार मध्याह्न बस दुर्घटना हुँदा कम्तीमा सातजनाको ज्यान गयो । बसका चालक पनि घाइते भए । काठमाडौंबाट पोखरा हुँदै स्याङ्जा जाने ना ६ ख २५०६ नम्बरको बस ना ५ ख ७४०९ नम्बरको ट्रकसँग ठोक्कियो ।
निर्वाचन आयोगले एक महिनाभित्र सबै तहका पार्टी समितिमा ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउन दिएको निर्देशन कुनै पनि राजनीतिक दलले पालना गरेका छैनन् । आयोगले जेठ २३ मा कानुनले तोकेअनुसार संरचना समावेशी बनाउन १ सय २५ दललाई पत्राचार गरेको थियो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ संसदीय प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने बताएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाई आइतबार बिहान
व्यवस्थापिका संसदको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठक आइतबार बिहानसम्मका लागि सरेको छ । विहीवारको संसदीय सुनुवाईपछि शुक्रवारका लागि डाकिएको बैठक आईतवार विहान ८ बजेका लागि डाकिएको हो ।
सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक दोस्रोपटक संसदमा पेश गरेको छ । अघिल्लो संसदमा पेश भएको विधेयकमा सहमति जुट्न नसकेपछि निष्क्रिय भएपछि सरकारले फेरि अर्को विधेयक संसदमा पेश गरेको हो । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शुक्रबारको बैठकमा विधेयक पेश गरेका हुन् ।
घुससहित गाउँपालिकाका लेखापाल पक्राउ
पर्साको धोबनी गाउँपालिका कार्यालयका लेखापाल र नायव सुब्बालाई ठेकेदारले दिएको एक लाख १० हजार रुपैयाँसहित अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारका काम कारबाहीबारे संसद्मा डटेर कुरा राख्न पार्टीका सांसद्लाई निर्देशन दिएका छन् ।
छात्राको अस्मितामाथि प्रश्न उठाउने प्रसाईंलाई कारबाहीको माग
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंलाई कारबाहीको माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा सांसदहरुले प्रसाईंलाई कारबाहीको माग गरेका हुन् ।
संसदको दोस्रो बैठक सुरु, गगन थापा र सरिता गिरीले फिर्ता लिए विरोध
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरुले डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच बिहीबार राती भएको सहमति सदनमा जानकारी नगराएको भन्दै अबरोध गरेपछि स्थागित संसदको बैठक सुरु भएको छ ।
अपडेट : चुम्लिङटार दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको सनाखत
इच्छाकामना गाउँपालिका–३ कुरिनटार, चुम्लिङटारमा शुक्रबार मध्याह्न बस र ट्रक जुध्दा आठ जनाको मृत्यु भएको छ । काठमाडौंबाट स्याङ्जा आउँदै गरेको ना६ख २५०६ नम्बर बस र मुग्लिनबाट जाँदै गरेको ना५ख ७४०९ नम्बर ट्रक ठोक्किएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री निवासमा केसीसँगको सहमतिबारे नेकपाका सांसदलाई ब्रिफिङ
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले चिकित्सा शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिबारे आफ्नो सांसदलाई आज जानकारी गराएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बिहान बसेको बैठकमा दलका उपनेता एवं उक्त सहमतिको पहलकर्ता सुवास नेम्वाङले सो सहमतिबारे जानकारी गराएका थिए ।
सरकारले कायम–मुकायम प्रधानसेनापतिमा बलाधिकृत रथी पूर्णचन्द्र थापालाई सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले नेपाली सेनाभित्रको वरीयता क्रमअनुसार थापालाई जिम्मेवारी दिन सिफारिस गरेको हो ।
फिरौती लिएपछि बालकको हत्या
जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–७, बाट डेढ महिनाअघि अपहरित ९ वर्षीय बालक अंकित गुप्ताको हत्या भएको खुलेको छ । उनी गत जेठ २२ मा घरछेउ साथीको घरमा खेल्न गएका बेला अपहरणमा परेका थिए ।
हराएको छोरालाई १५ वर्षपछि आँखैअघि देख्दा ५० वर्षे बाबु डिल्लीराम पुन बोल्नै सकेनन् । ६ वर्षीय छोरा विक्रम हराएपछि उनले चारैतिर खोजे । भेटेनन्, केही उपाय नलागेपछि घरमै बसिरहेका थिए । बुधबार विक्रमलाई देखेपछि बाबु डिल्लीराममा खुसीको सीमै थिएन ।
जोशीको निर्णय एक दिन थाती
प्रधानन्यायाधीशका लागि दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाइ बिहीबार सकिएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले ‘थप बुझ्नुपर्ने’ भन्दै शुक्रबार फेरि बैठक डाकेको छ । समितिले शुक्रबारै निर्णय दिनेछ ।
बस्तीमै पहिरो: ९ को मृत्यु, १२ घाइते
गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२ टिमुरेमा बुधबार राति पहिरोले पुरिएर ९ जनाको मृत्यु भएको छ । १२ जना घाइते छन् । पहिरो बस्तीभन्दा करिब ४ किमि माथिबाट आएको हो ।
शुक्रबार राति यो शताब्दीकै लामो खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्दै छ । ३ घण्टा ५५ मिनेट रहने ग्रहण नेपालबाट देख्न सकिन्छ । राति १२ बजेर ९ मिनेटमा ग्रहण सुरु हुनेछ भने १ बजेर १५ मिनेटमा चन्द्रमा पूरै ढाकिनेछ ।
कांग्रेसमा विवाद: क्रियाशील सदस्यता कारक
नियमित समयमै भए कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अबको २० महिनामा हुनेछ । तर, भावी नेतृत्व लिने महत्त्वाकांक्षाका साथ नेताहरू आन्तरिक रणनीतिमा अहिल्यैदेखि होमिएका छन् । सतहमा नेतृत्वबीचको टकराव दुई कित्तामा देखिन्छ ।
जतुवा क्षेत्रमा अचेल धमाधम पाइप बिछ्याइँदै छ । त्यसबाट पानी होइन, ग्यास बग्नेछ । यही साउनभित्र । महानगर १४ को यस इलाकाका बासिन्दाको चुलोमा त्यही पाइपको ग्यास आइपुग्नेछ ।
फोहोरबाट बायोग्यास । दिनको १ सय ५० सिलिन्डर उत्पादन । गोटाको ९ सय रुपैयाँ मूल्य । हाम्रै नवलपरासीमा । हो, पश्चिम नवलपरासीको सुक्रौलीमा ‘फोहोरबाट मोहर’ फल्न थालेको छ । इन्भिपावर इनर्जी एन्ड फर्टिलाइजर प्रालिले खाना पकाउने ग्यास निकालेर बेच्न सुरु गरिसकेको छ ।